5 Ulwahlulo olukhulu phakathi kweZikolo zikarhulumente kunye nezizimeleyo
Kubafundi nabazali Ukukhetha iSikolo esilungileyo
Imfundo yinxalenye ebalulekileyo yokukhulisa abantwana nokuzilungiselela ukuba baphile ubomi obuyimpumelelo. Kwiintsapho ezininzi, ukufumana indawo efanelekileyo yesikolo akulula kangangoko nje ukubhalisa kwisikolo sikarhulumente sasekuhlaleni. Ngolwazi esinalo namhlanje malunga nokufunda ukungafani kunye nezakhono zangekhulu le-21, akuzona zonke izikolo ezinokuhlangabezana neemfuno zabo bonke abafundi. Ngoko unokwenza njani ukuba isikolo sendawo sidibana neemfuno zomntwana wakho kwaye ukuba lixesha lokutshintsha izikolo ?
Ixesha lokuthelekisa ukhetho lwezikolo kwaye mhlawumbi ucinge ezinye iindlela zokukhetha esikolweni esiphakamileyo okanye kumabakala amancinci.
Ukuthelekiswa okuqhelekileyo kukuba zezikolo zikarhulumente kunye nezikolo ezizimeleyo. Uninzi lwezikolo zikarhulumente zijongene nezicwangciso zebhajethi ezikhokelela kwizikhulu ezincinci zeeklasi kunye nezibonelelo ezimbalwa, izikolo ezininzi ezizimeleyo ziqhubeka zikhula. Nangona kunjalo, isikolo sabucala singabiza. Ngaba ufanele utyalo-mali? Fumana ukuba kufuneka ukhethe isikolo sabucala kwisikolo sikarhulumente, nangona kukho iifizi zeefizi. Uyakwazi ukuyifumana okanye ukuba unokufumana iindlela zokufumana uncedo lwezemali.
Nazi ezinye zezinto ezibalulekileyo omele uzibuze yona malunga nokwahlukana phakathi kwezikolo zikarhulumente nezizimeleyo.
Zikhulu kangakanani ubukhulu beklasi?
Ubungakanani beklasi yenye yezona zimehluko ezinkulu phakathi kwezikolo zikarhulumente kunye nezikolo ezizimeleyo. Ubungakanani beklasi kwizikolo zikarhulumente zasemadolobheni zinokuba zikhulu njengabafundi abangama-25-30 (okanye ngaphezulu) ngelixa izikolo ezininzi ezizimeleyo zigcina ubuncinane beeklasi zabo kumyinge wama-10-15 abafundi, kuxhomekeke kwisikolo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye izikolo ziya kukhupha umfundi kumlinganiselo wothisha, ngaphezu koko, okanye ngezinye iindawo endaweni, ubukhulu bendawo yokufundela. Umfundi kumlinganiselo wothisha akafani nokulinganisa ubukhulu bamagumbi okufundela, njengokuba umlinganiselo uvame ukubandakanya ootitshala bexesha elide abangaba ngabafundisi okanye abafaka indawo, kwaye ngamanye amaxesha umlinganiselo ungabandakanywa nobuchule obungabikho bokufundisa (abalawuli, abaqeqeshi, abazali abalalayo) abayingxenye yabafundi bemihla ngemihla ngaphandle kweklasi.
Kukho izikolo ezizimeleyo kunye nabafundi abambalwa, oku kuthetha ukuba umntwana wakho uya kufumana ingqwalasela yomntu kunye nokukwazi ukufaka isandla kwiingxoxo zeklasini ezikhuthaza ukufunda. Ezinye izikolo zineTable Table, i-table evelele-oval eyaqala kwi- Philips Exeter Academy ukuvumela bonke abantu etafileni ukuba bajonge ngexesha leengxoxo. Ubukhulu beeklasi ezincinci kuthetha ukuba ootitshala banokunika abafundi ithuba elide kunye nobunzima, njengoko ootitshala abanakho amaninzi amanqaku okuba bafunde. Ngokomzekelo, abafundi kwizikolo ezininzi ezizimeleyo zeekholejini-ezizimeleyo zemfundo zeekholeji babhala amaphepha ephepha le-10-15 njengabafana nabadala.
Ootitshala bayilungiselela njani?
Nangona ootitshala besikolo sikarhulumente bahlala befuna ukuqinisekiswa, ootitshala bezikolo abazimeleyo badla ngokungafuneki isatifikethi esisemthethweni. Nangona kunjalo, abaninzi banengcali kwiimimandla yabo okanye banamagosa amakhono okanye abadokotela. Nangona kunzima ukususa ootitshala besikolo sikarhulumente, ootitshala bezikolo ezizimeleyo ngokubanzi banesivumelwano sokuhlaziywa ngonyaka.
Isikolo sikulungele njani ukulungiselela abafundi kwiikholeji okanye esikolweni esiphambili esikolweni?
Ngelixa izikolo ezininzi zikawonkewonke zenza umsebenzi omhle wokulungiselela abafundi kwiikholeji, abaninzi abanalo.
Ngokomzekelo, uphando olutshanje lufumene ukuba nezikolo zikarhulumente eziphakamileyo zase-New York zifumana amanani okulungisa ama-50% abo baphumeleleyo abaya kwiYunivesithi yaseYunivesithi yaseNew York. Uninzi lwezikolo ezizimeleyo zeekholejini zenza umsebenzi olungeleyo wokulungiselela abaphumeleleyo kwiikholeji, nangona kunjalo, oku kuyahluka ngokusekelwe kwisikolo ngasinye.
Sisiphi isimo sengqondo abafundi abanalo xa kuziwa esikolweni?
Ngokwengxenye, kuba izikolo ezizimeleyo zihlala zifumana iinkqubo zokwamkelwa ezikhethiweyo, ziyakwazi ukhetho lwabafundi abakhuthazwa kakhulu. Abafundi abaninzi bezikolweni ezizimeleyo bafuna ukufunda, kwaye umntwana wakho uya kujikelezwa ngabafundi abajonga impumelelo yemfundo njengenqwenelekayo. Kubafundi abangenayo imingeni ngokwaneleyo kwizikolo zabo zangoku, ukufumana isikolo esigcwele abafundi abakhuthazayo banokuphucula okukhulu kumava abo okufunda.
Ngaba isikolo siya kunika ezinye iinkonzo kunye nemisebenzi enentsingiselo kumntwana wam?
Ngenxa yokuba izikolo ezizimeleyo akumele zilandele imithetho yelizwe malunga nokufundiswa, zinokunikezela ngeenkqubo ezizodwa kunye nezizodwa. Ngokomzekelo, izikolo ezikolweni ziza kunika iiklasi zenkcubeko ngelixa izikolo ezizodwa zemfundo ziza kunika iinkqubo zokulungisa kunye neengcebiso ukunceda abafundi babo. Izikolo kaninzi zibonelela ngeenkqubo eziphambili kwiinsayensi okanye kwezobugcisa. Izikolo zasekuhlaleni zaseMilken eLos Angeles zatyala imali engaphezu kwezigidi ezingama-6 kwizikolo eziphuhliswayo kwiziko elizimeleyo. Ubume bendalo bubonisa ukuba abaninzi abafundi bezikolo ezizimeleyo bahamba esikolweni iiyure ezongezelelweyo ngosuku kunokufunda abafundi bezikolo zikarhulumente kuba izikolo ezizimeleyo zibonelela ngeenkqubo zesikolo emva kwenkqubo. Oku kuthetha ixesha elincinci lokungena kwiinkathazo kunye nexesha elininzi lokubandakanya kwimisebenzi.
Iingcebiso zootitshala beSikolo soBucala
Izibonelelo zeSikolo sabafana
Ivule indlu kwiZikolo ezizimeleyo
Izikolo ezimangalisayo kunye neeBhasi eziphantsi kweeBhodi kufuneka uqikelele
Yintoni iWaldorf School?
Izikolo zeHockey eCanada
Iimfihlakalo zeTitan ziveziwe
I-albhamu ye-Jazz ye-Jazz Trumpet
Abaphathiswa kunye nabaxhasi eMzantsi Afrika
Ngaba i-Glycerin iSebenza njengomgcini wee-Acrylic Paints?
Igalari yeSithombe seGemstone
I-Scorpio Love Tips
Lezi ziNdlovuzi ziyiNdoda
I-Top 10 Road Trip Albums, Ever
Uphi umvuzo weGoel's Prize?
URhulumente unokukunceda Uthenge iKhaya 'eliPhezulu-phezulu'